MARTISOOR: Xasan Jabhad iyo waayihiisii Jabhadda Xoreynta Soomaali Galbeed (WSLF) iyo wacyiga maanta iyo Jigjiga (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 21, 2019 3:11 b 0
Aqoonyahan Xasan Cabdilaahi Ducaale (Xasan Jabhad) oo ah halgamaa taariikh dheer ku leh halgankii xoreynta Soomaali Galbeed kana soo qaybqaatay welina qayb ka ah ololaha xornimo doonka waxa uu sannadkii 1977 isaga oo 16 jir ah ku biiray Jabhaddii Xoreynta Soomaali Galbeed (WSLF). Xiligaas Xasan waxa uu ahaa ardey haddana kama uu baqin in uu qorigana garabka saarto oo uu halganka duurka u galo.
Xasan Jabhad waxa uu walaac ka muujinayaa xaaladda maanta ee Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) iyo khataraha dagaalka ku socda deegaanka iyo dadka deegaanka, ha ahaado dagaalka qoriga ee deegan-la-wareegga kana socda Tulliguuleed iyo badanaa deegaanada ku hareersan Jigjiga ama kan siyaasadda ee laga karkarinayo Addis Ababa.
Xasan waxaa kale oo uu ka sheekaynayaa waxyaabaha fashiliya halgan walba oo laga abaabulo deegaanka iyo cadaawadda guunka ah ee Itoobiya iyo waxa ay Itoobiyaanku ka aaminsanyihiin Soomaalida, Soomaaliduna tahay sidii Xayle Salaase kal hore yiri, “dad xoolo-dhaqato ah oo aan awood iyo aqoon toona u laheyn maamul dowlo.”
Xasan Jabhad waxa uu maanta u sooranyahay wariye Khadar Cawl Ismaaciil.
Dowladda Deegaanka Soomaalida 379 MARTISOOR 103 Wararka 28793